धेरै छावा जन्माउने पूजाकलीको असामयिक मृत्यु
रासस मंगलबार, पुस ८, २०७६ मा प्रकाशित
भरतपुर । लामो समयदेखि बिरामी परेकी ३८ वर्षीया हात्ती ‘पूजाकली’को मृत्यु भएको छ । हात्ती प्रजनन तथा तालीम केन्द्र खोरसोर सौराहामा पालिएको पूजाकलीको आज बिहान असामयिक मृत्यु भएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत नारायण रुपाखेतीले जानकारी दिए ।
पूजाकलीको एक वर्षअघिदेखि नियमित उपचार गरिँदै आइएको निकुञ्जका वरिष्ठ चिकित्सक डा‍ विजय श्रेष्ठले जानकारी दिए । “एक वर्षदेखि धेरै रोगको परीक्षण गरेर उपचार गरियो”, उनले भने, “लाखौँ खर्च भयो तर रोग पत्ता लागेन ।” पूजाकली पछिल्लो छ महिनादेखि खाना कम खाने र दुब्लाउँदै गएको थियोे ।
पूजाकलीले झण्डै आधा दर्जन छावालाई जन्म दिएकी थिइन् । चिकित्सक श्रेष्ठका अनुसार केन्द्रमा सबैभन्दा धेरै छावा जन्माउने हात्तीमा पूजाकली पनि थिइन् । पूजाकली शव परीक्षणको तयारी भइरहेको छ ।
वि. सं. २०३८ मा पूजाकलीलाई कोसीटप्पुबाट चितवन ल्याइएको थियो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले संरक्षण गरेका ६३ हात्तीमध्ये अब ६२ हात्ती छन् । ७४ वर्षसम्मको हात्ती चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पालिएको छ । हात्तीको औषत आयु ७० देखि ८० वर्षसम्म हुन्छ ।
५४ जिल्लामा राप्रपाको अधिवेशन सम्पन्न १४ मिनेट पहिले
बेमौसमी वर्षाको पीडाः काटेर राखेको धान खेतमै उम्रियो ५१ मिनेट पहिले
आएन बाघ नियन्त्रणमा १ घण्टा पहिले
विवाहमा जाँदा हात भाँचिएपछि...
२७ सय वर्ष पुरानो शौचालय फेला, पुरातत्वविद् भन्छन्- प्राचीन कालका मानिस सौखिन
यो वर्षको अगस्ट १४२ वर्ष यताकै छैटौं गर्मी महिना
कुलत छोडेका व्यक्तिको पेटबाट चिकित्सकले निकाले एक किलो काँटी, पेच र छुरी
भारतीय ब्रेकफास्टको एउटा तस्विर जसले ततायो ट्विटरमा बहस